TANTARA AN-TSARY :: Hiroso amin’ny andiany fahatelo ny “Ambatonamelankafatra” • AoRaha
TANTARA AN-TSARY Hiroso amin’ny andiany fahatelo ny “Ambatonamelankafatra”
Nanana ny anjara toerany lehibe teo amin’ny fiarahamonina ny tantara an-tsary malagasy, tamin’ ny taona 80 sy ny fiandohan’ ny taona 90. Nihalefy tsikelikely izany taty aoriana.
Ho fanarenana izany no antom-pisian’ny hetsika “Ambatonamelankafatra”, nanomboka tamin’ny taona 2014. Fantatra fa hotanterahina etsy amin’ny Tahala Rarihasina Analakely ny andiany fahatelo amin’io hetsika io, manomboka ny 28 novambra ka hatramin’ ny 5 desambra ho avy izao.
Tafiditra ao anatin’ny fandaraham-potoana amin’izany ny fampirantiana ny angano sy ny tantara an-tsary, ny fanabeazana sy ny tantara an-tsary, ny sary sy ny fampianarana (hiarahana amin’i Clé Hobby), ny sary amin’ny sakafo (miaraka amin’ny Tout Mini). Ho hita ao ihany koa ny fanaovan-tsary mivantana sy lalao samihafa.
Anisan’ny hokendren’ ny hetsika “Ambatonamelan- kafatra” ny hiverenan’ny tantara an-tsary malagasy eo am-pelantanan’ireo mpankafy sy mpanohana hatrany am-boalohany. Endrika faharoa mampiavaka ity hetsika ity ihany koa ny maha Malagasy zato isan-jato azy.
Hasongadiny ao fa tsy fialam-boly fotsiny ihany ny tantara an-tsary fa azo anabeazana ny vahoaka ihany koa. Havohitrany koa fa ny taranja rehetra atao any an-tsekoly dia afaka tohanana amin’ny alalan’ ny tantara an-tsary.